Medical Low okpomọkụ Operating Platform - China Shandong Zhongbaokang Medical
Oge nzipu: Na 9 izu
Tụkwasịnụ ikike: 30 tent kwa ọnwa
Ọ na-eji na ọbara ụgbọ, n'ụlọ ọgwụ, ọrịa ụgbọ ụfọdụ nnyocha institutes. Ọ pụrụ ime ka a ala okpomọkụ arụ ọrụ ebe nke 2-8 ℃ na-ọbara nhazi si mmetụta nke elu okpomọkụ n'èzí, nke mma ọbara nchekwa. Ọ nwekwara ike-eji maka ala okpomọkụ Dissection Platform.
The okpomọkụ na-arụ ọrụ ebe dị edo na ọ dịghị odide.
The UV sterilizer emesi na-arụ ọrụ na ebe bụ free si ofufe.
Kewara Ọdịdị; Ọ dịghị mkpọtụ.
Easy ịkwaga na eriri.
Next: Nkwadebe Instrument Of Cryoprecipitated Antithemophilic Factors
Medical Low okpomọkụ arụ ọrụ Cabinet